डुबाउला फेसबुक म्यासेन्जरले ! यसरी हुन्छ ब्ल्याकमेलिङ | Sindhuli Saugat
डुबाउला फेसबुक म्यासेन्जरले ! यसरी हुन्छ ब्ल्याकमेलिङ
केशवराज जोशी २०७५ मंसिर १९ गते बुधवार काठमाडौं
काठमाडौं सीतापाइलाकी रेखा थापा (२४) (नाम परिवर्तन) ले फेसबुक चलाउँदा–चलाउँदै ‘क्यानडामा आकर्षक रोजगारी, अनलाइनबाटै आवदेन दिन पाइने भन्दै ‘नोटिफिकेशन’ आयो । उनले त्यो संस्थाको ठेगानामा आफ्ना सबै प्रमाण (आवश्यक कागजात) पठाइन् । रेखा क्यानडा जाने सपना देख्न थालिन् । विवाह गरेको एक महिना पनि भएको थिएन । अनलाइनबाट आवेदन गरेकी रेखाले श्रीमान्लाई सुरुमा केही बताइनन् । उनले श्रीमान्लाई क्यानडाको आवेदनबाट भिसा लागेपछि ‘सरप्राइज’ दिने सोचेकी थिइन् ।
प्रमाण पेस गरेको केही दिनपछि रेखाको म्यासेन्जरमा मेडिकल चेक गर्नुपर्ने र त्यो पनि अनलाइनबाटै हुने बताइयो । रेखा तयार भइन् । रेखालाई मेडिकलका लागि सन्देशमा आफ्नो कोठामा गएर पूरै कपडा खोलेर नग्न शरीर देखाउन भनिएको थियो । रेखा त्यो गर्न पनि तयार भइन् । रेखाले भिडियोमा शरीर देखाउनुपूर्व अनुहार नदेखाएर एक महिला बोलिन् । महिलाले रेखालाई आफ्ना गोप्य अंग हातले चलाउन भनिन् । रेखाले त्यो पनि गरिन् ।
केही दिनपछि फेरि रेखालाई सन्देश आयो– ‘तपाईं अहिले छनोट हुनुभएन तर अब तपाईंले कुनै आफ्नो साथीलाई नाङ्गो बनाएर भिडियो बनाउन लगाउनुभयो भने क्यानडा पठाइदिन्छु ।’
सुरुमा श्रीमान्लाई ढाँटेकी रेखालाई अरुको शरीर पनि देखाउनुपर्छ भनेपछि बल्ल मनमा शंका पलायो। त्यसपछिमात्र उनले श्रीमान्सँग सबै कुरा बताइन् । रेखाले ती महिलालाई अब आफूले त्यसो गर्न नसक्ने बताइन् । त्यसपछि उनलाई म्यासेन्जरमै धम्की आयो– ५ हजार डलर हाम्रो ठेगानामा पठाऊ, होइन भने तिम्रो नग्न भिडियो पोर्न साइडमा अपलोड गरिदिन्छौं ।
रेखा त्यसपछि महानगरीय अपराध महाशाखा उजुरी लिएर पुगिन् । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा त्यो संस्थाले रेखाजस्तै १ सय ३० जना नेपाली महिलाको त्यसरी नै भिडियो बनाएको खुलेको छ । त्यसको आईपी एड्रेस क्यानडा देखाएको छ ।
केही दिनअघि चितवनका मित्रसेन गुप्ता (नाम परिवर्तन) एउटा अनौठो उजुरी लिएर महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुमा पुगे । उनी त्यो उजुरी लिएर जाँदा आफैं लज्जित पनि देखिन्थे ।
केही दिनअघि उनको फेसबुकमा एकजना फिलिपिनी युवतीले साथी बन्न अनुरोध गर्दै सन्देश पठाइछन् । सुन्दरीको तस्बिर देखेपछि गुप्ताले सहजै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरे । सुन्दरी र गुप्ताबीच च्याट सुरु हुन थाल्यो । नजिकिँदै गएपछि ती सुन्दरीले गुप्तासँग ‘सेक्स च्याट’ गरौं न भन्ने प्रस्ताव गरिन् । च्याट गर्दागर्दै गुप्ता र सुन्दरी दुवैजना पूरै नग्न भए । अर्को दिन पनि फेरि सुन्दरी र गुप्ताबीच ‘सेक्स च्याट’ भयो ।
केही दिनपछि ती सुन्दरीले गुप्तासँग २ हजार डलर पठाइदिन आग्रह गरिन् । गुप्ताले पैसा नभएको बताएपछि ती सुन्दरीले ब्ल्याकमेल सुरु गरिन् । सुन्दरीले गुप्तासँग भएको अनलाइन सेक्सको भिडियो रेकर्ड गरेकी रहिछन् । उनले २ हजार नपठाए गुप्ताको फेसबुकमा जोडिएका सबैलाई नाङ्गो भिडियो पठाइदिने चेतावनी दिएपछि उनी अपराध महाशाखाको शरणमा पुगेका रहेछन् । उनीसँगै महेन्द्र (नाम परिवर्तन) पनि यस्तै घटना लिएर महाशाखा पुगेका छन् ।
देवराज (नाम परिवर्तन) पनि एकजना मोरक्कोकी युवतीसँग ‘अनलाइन सेक्स’कै कारण ‘ब्ल्याकमेलिङ’ मा परेपछि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका छन् ।
केही समयअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका गुल्मीका एक युवक कैलाश (नाम परिवर्तन) ले मलेसियामै आत्महत्या गरे । आत्महत्याको कारण थियो– फेसबुक । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार एकजना कसैले कैलाशको ‘फेक’ फेसबुक आईडी बनायो । कैलाशकै नामबाट आईडी बनाएर उनकी दिदीलाई साथी बनायो । भाइ भनेर रोशनी (नाम परिवर्तन) ले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरिन् ।
विस्तारै कैलाशको फेसबुकबाट रोशनीको म्यासेन्जरमा पुरुषको यौनाङ्ग, अश्लिल भिडियो, तस्बिर आउन थाले । भाइको आईडीबाट रोशनीलाई आएको सन्देशले उनी तनावमा परिन् । उनले मलेसियामै रहेका भाइ कैलाशलाई फोन गरेर सबै सोधखोज गर्दा कैलाश अचम्ममा परे । त्यसपछि कैलाशले दिदीलाई भनेका थिए, ‘‘दिदी म नेपाल आउँछु । यो कसले गर्यो, मिलेर पत्ता लगाउँला ।’’ तर केही दिनपछि कैलाशले मलेसियामै आत्महत्या गरे ।
भक्तपुरमा पनि एक युवतीले फेसबुककै कारण आत्महत्या गरिन् । आफ्नै प्रेमीले गोप्य तस्बिर सार्वजनिक गरिदिएपछि उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
पोखराकी रेखा थापा (नाम परिवर्तन) ३ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बसेर नेपाल फर्किइन् । विदेशमा रहँदा उनी रोहित शर्मा (नाम परिवर्तन) सँग ‘लिभिङ टुगेदर’ मा थिइन् ।
नेपाल आएपछि रेखाले मागी विवाह गरिन् । उनले विवाह गरेको खबरपछि रोहितले रेखाको श्रीमान्को फेसबुक म्यासेन्जरमा आफू रेखाको श्रीमान् भएको भन्दै सँगै बस्दाको तस्बिर पठाए । यहाँसम्म कि उनले रेखा गर्भवती भएको र त्यो बच्चा आफ्नो भएको दाबी गरे । रोहितको त्यो म्यासेजपछि रेखा र अशोकको सम्बन्धमा दरार आएको छ । विवाह गरेको एक महिनामै उनीहरु छुट्टिए । रेखा अहिले माइतीघरमा बस्दै आएकी छन् । विदेशमा भएकाले रोहितलाई सहजै पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीलाई कानुनी जटिलता छ । …
सामाजिक सञ्जालका कारण पछिल्लो समय देखापरेका डरलाग्दा केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी । महाशाखाका एसएसपी धिरजप्रताप सिंह पछिल्लो समय कलेज उमेरका युवामा अश्लील भिडियो बनाउने र पछि कुरा नमिल्दा त्यही भिडियोलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार सहमतिमा ‘पोर्न’ भिडियो बनाएको र पछि दुरुपयोग गरेको भन्दै महाशाखामा सयौं उजुरी आएका छन् । पक्राउ पर्ने अधिकांश जोडीका एकजना वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखिएको सिंहको भनाइ छ ।
महाशाखाको तथ्यांकअनुसार साइबर अपराध वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । महाशाखाका एसएसपी सिंह सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको बताउँछन् । महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१–०७२ मा साइबर अपराधका ३०५ मुद्दा दर्ता हुँदा ०७२–०७३ मा ८३० मुद्दा दर्ता भए । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा ११९७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै ०७५–०७६ मा हालसम्म १ सय ४० वटा साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
महाशाखाका अनुसार दैनिक औषतमा २० जना साइबर अपराधबाट पीडितहरु उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन् । महाशाखामा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी उजुरी नै साइबर अपराधका आउने गरेका छन् ।
‘लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दा ध्यान दिऊँ’
महाशाखाका एसएसपी सिंहका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी आकृति बिगारेर तस्बिर पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने, आईडी ह्याक गर्ने, कुरा नमिल्दा ब्ल्याकमेल गर्नेजस्ता घटना साइबर अपराध अन्तर्गत पर्दछन् । त्यसैले यस्ता कुराको प्रयोग गर्दा सचेतता नअपनाए कानुनी कारवाहीको दायरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । साइबर अपराधमा जानेर वा नजानेर विदेशमा बस्नेहरु बढी सक्रिय छन् ।
‘‘बेलाबेला नेताहरुको फेक आईडी बनाउने, अनावश्यक कुरा ब्लगहरुबाट सेयर गर्नेजस्ता कार्य हुने साइबर अपराध आकर्षित गर्ने विषय हुन् । समाजमा विकृति फैलाउने, कसैको तथ्यहीन बदनाम गर्ने कार्य कसैले लेखेमा त्यसको तल नकारात्मक कमेन्ट, लाइक सेयर गर्ने सबै पक्राउ पर्न सक्छन्,’’ एसएसपी सिंहले भने ।
फेक आईडीको मारमा सबैभन्दा बढी कलाकार र नेताहरु परेका छन् । साइबर अपराधबारे सबै सचेत हुनुपर्ने महाशाखाको सुझाव छ । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत साइबर अपराधमा संलग्नलाई कसुरको मात्रा हेरेर ३ वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय इमेल ‘ह्याकिङ’ हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।
के हो साइबर अपराध ?
साइबर अपराध (साइबर क्राइम) कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका अपराधहरु हुन् । साइबर अपराधमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटसँग सम्बन्धित आपराधिक सबै गतिविधिहरु पर्छन् ।
इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत् गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्य साइबर अपराध अन्र्तगत पर्छन् । बाह्रखरीबाट।
पछिल्लाे - संसारमै कहिँ नपाइने ‘योनी बियर’ पोल्याण्डमा पाइन्छ !
अघिल्लाे - निर्मला हत्याकाण्डः संलग्नताको आशंकामा काठमाडौंबाट एकजना पक्राउ